Allende, Barceló uye Sáenz de Urturi. Liber 2020 Mubairo, National Vana uye Vechidiki Mabhuku uye Planet | Zvazvino Zvinyorwa
Allende, Barceló uye Sáenz de Urturi. Liber 2020 Mubairo, National Vana uye Vechidiki Mabhuku uye Planet
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Makwikwi neMubairo, Vanyori, Mabhuku, dzakawanda
Mumwedzi uno wevanyori takave nenhau dzakanaka kwazvo. Kune vatatu vanokunda ekupedzisira uye akakosha mibairo yakapihwa. Isabel Allende atora iyo Kusununguka 2020 yebasa rake rekunyora, Elia Barceló el Mubairo weNyika weVana neVechidiki Zvinyorwa game Iyo Frankenstein mhedzisiro y Eva García Sáenz de Urturi ndichangobva kuhwina iyo Planet Mubairo game Aquitaine.
1 Isabel Allende - Akasununguka 2020
2 Elia Barceló - Mubairo weNyika weVana neVechidiki Zvinyorwa
3 Eva García Sáenz de Urturi - Mubairo wePlaneta
Isabel Allende - Akasununguka 2020
La Federation of Vaparidzi Guilds yeSpain (FGEE) yakapa uyu mubairo kune munyori weChilean semunyori akatanhamara wemuSpanish American nekuda kwebasa rake rekunyora.
Pasina mubvunzo, Isabel Allende ndomumwe wevanyori vanoverengerwa zvakanyanya pasirese vane zvinopfuura 74 mamirioni emabhuku akatengeswa, ine makumi maviri nemana mabasa akashandurwa kupinda kupfuura 42 mitauro uye zvinogara zvichirumbidzwa nevatsoropodzi nevaverengi. Iyo kuonekwa nyika yakauya kwaari muna 1982 neruzivo rwake rwekutanga, Imba Yemweya. Kubva ipapo, inoshanda senge ZveRudo neMimvuri, Eva Luna, Mwanasikana wepfuma, Paula, Mudiwa weJapan, Kupfuura chando uye ichangoburwa Yakareba yegungwa petal.
Mhemberero yemubairo ichave iriko 27 yeOctober kuArizona Santa Mónica, muBarcelona, ​​izere Zvakanaka Liber 2020.
Elia Barceló - Mubairo weNyika weVana neVechidiki Zvinyorwa
Elia Barceló Iye anobva kuAlicante uye akadzidza Hispanic uye Anglo-Germanic Philology. Anogara mu Innsbruck (Austria), kwaanodzidzisa echiSpanish mabhuku uye makirasi ekunyora kuyunivhesiti. Iye anosanganisa basa nerokunyora kudanwa uye ndiye munyori wenoverengeka dzevakuru nevechidiki idzo dzakashandurwa mumitauro inopfuura gumi. Mazita avo ezvinzvimbo Nyaya yemunyori ane hutsinye y Cordeluna vakatora iyo Edebé Mubairo weVechidiki Mabhuku. Mune imwe chete yekunyora iye akaburitsa Iyo Opera Mhosva Yenyaya y Knights dzeMalta.
Iye zvino akunda iyo PYenyika Mubairo weVana uye Yevaduku Mabhuku 2020, ine huwandu hwe20.000 euros, kubudikidza Iyo Frankenstein mhedzisiro. Mune ino novel, Barceló anobhadhara mutero kubasa raMaria Shelley, uye akambopihwa ne XXVII Edebé Mubairo weMabhuku muhunhu hwevechidiki gore 2019.
Nyeredzi Nora, one XNUMXst wezana ramakore mudzidzi wezvekurapa, uyo anofanirwa kugara munharaunda iyoyo uye anotarisana nekukonana kwetsika nematambudziko ehunhu aanosangana nawo. Iyo Frankenstein mhedzisiro Iri izambuko rehurukuro pakati penguva mbiri uye rinoita kuti tifunge nezve kusaenzana kwevanhukadzi nehunyanzvi uye nemagariro. Saizvozvo, semubasa raShelley, zvinokanganisawo chisungo chekuzadzikisa mabasa nekutambira mhedzisiro yezviito zvedu.
Eva García Sáenz de Urturi - Mubairo wePlaneta
Mushure megore rapfuura, gore rino rechikadzi rePlanet Mubairo richaenda kumunyori weBasque wenoverengeka yake Aquitaine. La wokupedzisira fue Sandra Barneda, for Gungwa kuti usvike pano.
Eva García Sáenz de Urturi Akadzidziswa sachiremba wemaziso, asi akazove munyori anotengesa zvakanyanya kuSpain husiku hwese. Akatanga kuzvishambadza-yake yekutanga nhaurwa paAmazon, Saga rekare (2012), iyo mumavhiki maviri chete yakatsvaira kutengesa uye ikava chiitiko. Gare gare, mamwe maviri enoveli (emapeji angangoita mazana mashanu) uye muna500 akaburitsa akateedzana ake akakurumbira, atove muPlaneta imba yekutsikisa: la Trilogy yeGuta Dzvuku, yakagadzirwa ne Runyararo rweGuta Dzvuku, Zvibodzwa zveMvura uye Iwo maIshe enguva. Iyo yakateedzana iyo yatengesa anopfuura mamirioni emakopi uye yakave neichangoburwa firimu kuchinjiswa inotungamirwa na Daniel Calparsoro.
Sáenz de Urturi akatsanangura izvozvo Aquitaine Ndicho thriller medieval, mutero kuna Zita rerosi, naUmberto Eco, senge paradigm yenyaya yematsotsi ine nhoroondo yezvakaitika kare.
Sandra Barneda, mufainari, akaisa nyaya padare redzimhosva. Anonyanya kuzivikanwa semutori wenhau uye mutepfenyuri wepa terevhizheni, Barneda akanyora mabhuku mashanu (matanhatu neiri) kubva paakatsikisa chimiro chake chekutanga. Sekai mumhepo mu 2013.
Iyo gara yakaitwa nezuro manheru ku Palau de la Música de Barcelona, yakagadziriswa neazvino mamiriro ehutano uye yakatemerwa kumhemberero yepedyo nevashanyi vashoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Allende, Barceló uye Sáenz de Urturi. Liber 2020 Mubairo, National Vana uye Vechidiki Mabhuku uye Planet